မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တက်တဲ့ စုံတွဲများအတွက် - Pyone Pyone Lay
မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တိုင်း FB/phone Block တက် သူများသာ ဖတ်ရန် ဖုန်းခေါ်လို မအားရင် သေချာပြီ ဒီနေ့ ရန်ဖြစ်ရတော့ မယ် ဆိုတာ။
သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးနဲ များဖုန်းပြောတာလိုပြောရင် သဝန်တိုပြီး ဖြေရှင်းမရ ၊ပြသနာရှာ တက်တဲ့ ချစ်သူ တစ်ယောက်ရှိနေပြီလား။
ဒါဆို သင်ဟာ အရမ်းကံကောင်းသူ တစ်ယောက်ပါ။ သင့်အပေါ်သူ အရမ်းချစ်တဲ့ သူမို့ပါ။ စိတ်ဆိုးပြီး ဖုန်းကို Blockထားပေမယ့် တခြားဖုန်းနဲ ဖုန်ပြန်ဆက်ချော့ မှာကို မျော်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။
သင့်ပေါ် စိတ်ဆိုး တိုင်း Blockတိုင်း သင်ဘက်က တခြားနည်းနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ် ပြီးရှင်းပြပါ။
မကြာခဏ ရန်ဖြစ်တိုင်း Facebookကို Blockလိုက် ဖုန်းကိုBlockလိုက်နဲ အဲလို ချစ်သူစုံတွဲတွေ ရှိလား.?။
ဒါဆိုရင် သေချာတာ ကတော့ အဲစုံတွဲတွေ ဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြ တဲ့သူတွေ ဆိုတာ လက်ခံပါသလား?။
မကြာခဏ အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ရန်ဖြစ်တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖုန်းပြန်ဆက်Messageပို့မှာမျော်နေတဲ့ သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြ လိုဆိုတာ သင်ငြင်းပါ သလား?။
စိတ်ဆိုးတိုင်း စကားအကြမ်းတွေနဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အကျိတ်အနယ်ပြောပြီ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မဆက်သွယ်ဘဲ နေခဲကြပြီး မကြာပါဘူး ပြန်ဆက်သွယ်ပြီး ခုချိန်ထိ ရန်ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ခွင့်လွတ်ပြီး ဆက်တွဲနေကြ ဆဲမလား။
ဒါဆို သင်တိုနှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းချစ်တယ် ဆိုတဲ့သက်သေပါ။
Onlineမွာ Active nowပြ မီစိမ်းလင်းနေရင် စာမပို့ /စကားမပြောရင် ဘယ်သူ နဲchatနေလည်း/ Qနေလည်းဆိုပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ပြသနာရှာရန် ရှာဖူးလား?။
အဲလို နဲရန်ဖြစ် Block ဖုန်းပိတ်ပြီးအိပ်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေ ဘယ်နှစ်ရက်တောင် ရှိပြီလဲ?။ ဒါဆိုသင်တို့ နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြလို့ပါ။
တစ်ယောက်ယောက်က WallထဲCommetပေးလို့ရန်ဖြစ်ခဲဘူးလား?။တစ်ယောက်ယောက်က Tagတွဲလို့ Tagကိုဖြုတ်ပစ်ခဲရဘူးလား?
ဒီအချက်တွေဟာလည်း သင်အပေါ်သင့်ချစ်သူ ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသိသာလွန်းလှပါတယ်။
အရမ်းသဝန်တို ချူပ်ချယ်လွန်း တယ် ထင်ရပေမဲ့ သင့်ကို အရမ်းချစ် လိုပါ သင် ဘက် ကနားလည် အောင်း ရှင်ပြသင့်ပါတယ် ။ အဲလို ချစ်သူမျိုး ပိုင်ဆိုင် ထားရင် တန်ဖိုးထား သင့်ပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်ရဲ့ Acc ကိုBlockထားပေမဲ့ တစ်ခြားအကောင့်ကနေ သူဘာတွေ တင်လည်း သူဘာတွေ လုပ်နေလည်း ဘယ်သူတွေက Commentတွေမှာ ဘာတွေ မန့်လည်း
တစ်ယောက် အကောင့်ကို တစ်ယောက် ခိုးကြည့် ဘူးလား?။ ဒါဆိုသင်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြ တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပါ။
ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း တစ်ယောက် ဖုန်းတစ်ယောက် Blockထားပေမယ့် တစ်ခြားဖုန်းနဲ သူဘာလုပ်နေလည်း ဘယ်သူ နဲပြောနေလည်း သိခြင်လို ဖုန်းဆက်ကြည့် ဘူးကြတယ် မဟုတ်လား?။ ဒါတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြ တဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြလို့ပါ။
အခုလိုတွေ ရန် ခဏခဏဖြစ်နေကြ လို စိတ်ညစ်နေ ပြီလား?။ စိတ်မညစ် ပါနဲ ဒီစာလေးဖတ်ပြီးတာနဲ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် နားလည်မူ ယူပါ။ ညှိနိူင်းပါ။ သူဘက်ကိုယ့်ဘက်မျှတွေးပါ။
တစ်ယောက်တကို တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြတဲ့ အတွက် ဝေးသွားရင် နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဆုံးရှုံးမူ့ တစ်ခုပါ။ အခု ကစပြီး တစ်ယောက်နဲ တစ်ယောက် သဘောထားကြီး စွာနဲ သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝလေး တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
ပြသနာ တစ်ခုဖြစ်မယ် ကြုံတိုင်း တစ်ယောက်ယောက် ကအလျော့ပေးပါ။ နောက်တစ်ခုကတောင်းပန် ပါ။
သင့်ချစ်သူကို တောင်းပန် လိုက်တာဟာ သင့်သူကို ဘယ်လောက် ချစ်တယ်ဆို တာပြ လိုက်တာ ပါ။ ချစ်တဲ့ သူတိုင်း ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖန်တီးနိုင်ပါစေ။
မကွာခဏ ရနျဖွဈတကျတဲ့ စုံတှဲမြားအတှကျ
မကွာခဏ ရနျဖွဈတိုငျး FB/phone Block တကျ သူမြားသာ ဖတျရနျ ဖုနျးချေါလို မအားရငျ သခြောပွီ ဒီနေ့ ရနျဖွဈရတော့ မယျ ဆိုတာ။
သူငယျခငျြး မိနျးကလေးနဲ မြားဖုနျးပွောတာလိုပွောရငျ သဝနျတိုပွီး ဖွရှေငျးမရ ၊ပွသနာရှာ တကျတဲ့ ခဈြသူ တဈယောကျရှိနပွေီလား။
ဒါဆို သငျဟာ အရမျးကံကောငျးသူ တဈယောကျပါ။ သငျ့အပျေါသူ အရမျးခဈြတဲ့ သူမို့ပါ။ စိတျဆိုးပွီး ဖုနျးကို Blockထားပမေယျ့ တခွားဖုနျးနဲ ဖုနျပွနျဆကျခြော့ မှာကို မြျောနတေဲ့ သူတဈယောကျပါ။
သငျ့ပျေါ စိတျဆိုး တိုငျး Blockတိုငျး သငျဘကျက တခွားနညျးနဲ့ ပွနျဆကျသှယျ ပွီးရှငျးပွပါ။
မကွာခဏ ရနျဖွဈတိုငျး Facebookကို Blockလိုကျ ဖုနျးကိုBlockလိုကျနဲ အဲလို ခဈြသူစုံတှဲတှေ ရှိလား.?။
ဒါဆိုရငျ သခြောတာ ကတော့ အဲစုံတှဲတှေ ဟာ တဈယောကျကို တဈယောကျအရမျးခဈြကွ တဲ့သူတှေ ဆိုတာ လကျခံပါသလား?။
မကွာခဏ အကွိမျပေါငျး မြားစှာ ရနျဖွဈတဈယောကျကို တဈယောကျ ဖုနျးပွနျဆကျMessageပို့မှာမြျောနတေဲ့ သူတှဟော တဈယောကျကို တဈယောကျ အရမျးခဈြကွ လိုဆိုတာ သငျငွငျးပါ သလား?။
စိတျဆိုးတိုငျး စကားအကွမျးတှနေဲ တဈယောကျကို တဈယောကျအကြိတျအနယျပွောပွီ တဈယောကျကို တဈယောကျ မဆကျသှယျဘဲ နခေဲကွပွီး မကွာပါဘူး ပွနျဆကျသှယျပွီး ခုခြိနျထိ ရနျဖွဈပွီး တဈယောကျကို တဈယောကျ ခှငျ့လှတျပွီး ဆကျတှဲနကွေ ဆဲမလား။
ဒါဆို သငျတိုနှဈယောကျဟာ တဈယောကျကို တဈယောကျ အရမျးခဈြတယျ ဆိုတဲ့သကျသပေါ။
Onlineမှာ Active nowပွ မီစိမျးလငျးနရေငျ စာမပို့ /စကားမပွောရငျ ဘယျသူ နဲchatနလေညျး/ Qနလေညျးဆိုပွီး တဈယောကျကို တဈယောကျပွသနာရှာရနျ ရှာဖူးလား?။
အဲလို နဲရနျဖွဈ Block ဖုနျးပိတျပွီးအိပျခဲတဲ့နရေ့ကျတှေ ဘယျနှဈရကျတောငျ ရှိပွီလဲ?။ ဒါဆိုသငျတို့ နှဈယောကျ တဈယောကျကို တဈယောကျ အရမျးခဈြကွလို့ပါ။
တဈယောကျယောကျက WallထဲCommetပေးလို့ရနျဖွဈခဲဘူးလား?။တဈယောကျယောကျက Tagတှဲလို့ Tagကိုဖွုတျပဈခဲရဘူးလား?
ဒီအခကျြတှဟောလညျး သငျအပျေါသငျ့ခဈြသူ ဘယျလောကျခဈြတယျဆိုတာသိသာလှနျးလှပါတယျ။
အရမျးသဝနျတို ခြူပျခယျြလှနျး တယျ ထငျရပမေဲ့ သငျ့ကို အရမျးခဈြ လိုပါ သငျ ဘကျ ကနားလညျ အောငျး ရှငျပွသငျ့ပါတယျ ။ အဲလို ခဈြသူမြိုး ပိုငျဆိုငျ ထားရငျ တနျဖိုးထား သငျ့ပါတယျ။
တဈယောကျနဲ တဈယောကျ ရနျဖွဈပွီး တဈယောကျရဲ့ Acc ကိုBlockထားပမေဲ့ တဈခွားအကောငျ့ကနေ သူဘာတှေ တငျလညျး သူဘာတှေ လုပျနလေညျး ဘယျသူတှကေ Commentတှမှော ဘာတှေ မနျ့လညျး
တဈယောကျ အကောငျ့ကို တဈယောကျ ခိုးကွညျ့ ဘူးလား?။ ဒါဆိုသငျတို့ တဈယောကျကိုတဈယောကျအရမျးခဈြကွ တယျဆိုတဲ့ သကျသပေါ။
ရနျဖွဈတဲ့အခါတိုငျး တဈယောကျ ဖုနျးတဈယောကျ Blockထားပမေယျ့ တဈခွားဖုနျးနဲ သူဘာလုပျနလေညျး ဘယျသူ နဲပွောနလေညျး သိခွငျလို ဖုနျးဆကျကွညျ့ ဘူးကွတယျ မဟုတျလား?။ ဒါတှဟော တဈယောကျကို တဈယောကျ အရမျးခဈြကွ တဲ့ ခဈြသူတှဖွေဈနကွေလို့ပါ။
အခုလိုတှေ ရနျ ခဏခဏဖွဈနကွေ လို စိတျညဈနေ ပွီလား?။ စိတျမညဈ ပါနဲ ဒီစာလေးဖတျပွီးတာနဲ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ နားလညျမူ ယူပါ။ ညှိနိူငျးပါ။ သူဘကျကိုယျ့ဘကျမြှတှေးပါ။
တဈယောကျတကို တဈယောကျ အရမျးခဈြကွတဲ့ အတှကျ ဝေးသှားရငျ နှဈယောကျစလုံးအတှကျဆုံးရှုံးမူ့ တဈခုပါ။ အခု ကစပွီး တဈယောကျနဲ တဈယောကျ သဘောထားကွီး စှာနဲ သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝလေး တဈခုကိုဖနျတီးနိုငျဖို့ကွိုးစားပါ။
ပွသနာ တဈခုဖွဈမယျ ကွုံတိုငျး တဈယောကျယောကျ ကအလြော့ပေးပါ။ နောကျတဈခုကတောငျးပနျ ပါ။
သငျ့ခဈြသူကို တောငျးပနျ လိုကျတာဟာ သငျ့သူကို ဘယျလောကျ ခဈြတယျဆို တာပွ လိုကျတာ ပါ။ ခဈြတဲ့ သူတိုငျး ပြျောရှငျ ခမျြးမွဖှေ့ယျကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖနျတီးနိုငျပါစေ။